netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:အလှဆင်ပစ္စည်းများ
Baby Bright White Plankton DD Anti-Pollution Daily Defense Cream SPF50 PA++30g
White Plankton DD Anti-Pollution Daily Defense Cream လေးကတော့ နေရောင်ခြည်အားကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် လေထုညစ်ညမ်းကြောင့် အသားအရေထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းအား ကာကွယ်ပေးနိုင်သော Cream လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပါးသော ခရမ်သားဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး အသားအရေအတွက်လိုအပ်သော အာဟာရဓါတ်များအားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရုံသာမက UV rays များမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် မျက်နှာပေါ်ရှိအပြစ်အနာအဆာများအား အကောင်းဆုံးဖုံးအုပ်ပေးနိုင်သောကြောင့် သဘာဝဆန်သောသွင်ပြင်ကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရမ်လေးဟာဆိုရင်တော့ ဖုန်မှုန်များနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အသားအရေညစ်ညမ်းခြင်းအား ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် အရေးကြောင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းအား နှောင့်နှေးစေပြီး ချွေးပေါက်များအတွင်း အညစ်အကြေးများ ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အသားယားယံခြင်းများကိုလျော့ချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် White Plankton ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သော အသားအရေအား အားပြည့်ကျန်းမာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Baby Bright2in 1 Eye&Cheek #Jeju Code:8858842037300
Baby Bright မှထုတ်လုပ်လိုက်သော 2in 1 Eye & Cheek Cream လေးကတော့ သင့်အသားအရေအား သဘာဝအတိုင်းလင်းလက်တောက်ပစေရန် ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်ဒါလိမ်းပြီးနောက်2in 1 Eye & Cheek Cream လေးအားအပေါ်မှထပ်၍ လိမ်းခြယ်ပေးရုံဖြင့် တစ်နေ့တာလုံး ကျန်းမာလှပသောသွင်ပြင်အား ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Cream လေးကိုတော့ ပါးပြင်၊ မျက်ခွံနှင့် နှုတ်ခမ်း များကိုလိမ်းခြယ်နိုင်သော Cream လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
SAI Sexy & Intellilgent Long Lasting Liquid Eyeliner
-ရေစိုလို့ပျက်မှာမစိုးရိမ်ရတဲ့ ရေစိုခံ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာစွဲလို့ရပါတယ်။ မှင်မပိတ်၊ မှင်မပျံ့အောင်လည်းထိန်းပေးထားတဲ့အတွက် ပထမဆုံးသုံးမယ့်သူများအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်။ အထူအပါးအမျိုးမျိုးလည်း ဆွဲနိုင်ပါသေးတယ်။
-တနေ့တာလုံးတာရှည်ခံပြီး အလှအပတွေကို အချိန်တိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကာလာထွက်မှန်ကန်ဖို့ စိတ်ချရပါတယ်။
SAI Sexy & Intellilgent Sponge 03 Pink
-ပန်းရောင် Makeup Sponge လေးကတော့ Powder ၊ Cream နဲ့ Blush လိမ်းတဲ့နေရာမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
SAI Sexy & Intellilgent Sponge 02 Nude
-အသားရောင် Makeup Sponge လေးကိုတော့ Foundation makeup လိမ်းတဲ့အခါမှာ သုံးနိုင်ပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ မျက်နှာလေးဖြစ်သွားအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
SAI Sexy & Intellilgent Sponge 01 Black
အနက်ရောင် Sponge ပုံစံလေးကတော့ Bronzer လေးတွေ လိမ်းတဲ့အခါမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Long wear makeup လိမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ်နော်။
Cathy Doll Travel Make Up Brush 3Pcs Code:8858842025291
Cathy Doll မှထုတ်လုပ်လိုက်သော Travel Make Up Brush Set လေးကတော့ ပိုက်ဆံအိတ်အသေးစားအရွယ်အစားဖြစ်သောကြောင့် မိမိသွားလေရာသို့လွယ်ကူစွာသယ်ဆောင် အသုံးပြုနိုင်မည့် Brush Set လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရည်သွေးကောင်းသော အမွှေးမျှင်များနှင့်ကြာရှည်ခံသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် မည်သည့်လိမ်းခြယ်မှုမျိုးကိုမဆို လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Macaron Travel Make Up Brush Set လေးမှာဆိုရင်တော့ ပေါင်ဒါနှင့်ပါးနီလိမ်းခြယ်နိုင်သော on brush တစ်ခု၊ နူတ်ခမ်းနီဆိုးရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သော lip brush တစ်ခုနှင့် မျက်လုံးလိမ်းခြယ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သော eye brush တစ်ခုတို့ပါဝင်ပါတယ်။
Cathy Doll Petit Magic Blender # Green Code:8858842024928
Cathy Doll Petit Ice Cream Magic Blender can be used in wet or dry condition. It can be also used with pressed powder.
Cathy Doll Dolly Mirror #Handheld Code:8858842024812
Cathy Doll ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရုပ်မှန်လေးဖြစ်ပါတယ်။
Cathy Doll Ice cream Blender Code:8858842023549
Sponge makes the bass foundation or BB cream concealer and blush cream to easily and quickly make cosmetic facial dispersed regularly.
Skin looks smoother than the base and foundation by hand or puff general.
Can be used either wet or dry. When wet sponge to grow larger.
Compatible with pressed powder texture soft sponge tightly grip the base of the sponge is used in the foundation area, such as the forehead or cheek, the side tipped to take the ferret to hard to reach places such as cleft nose, under the eyes
Min: 1($) Max: 7($)
All Accessories Blusher Eyeliner Mirror မိတ်ကပ်ှSponge
All Karmart Sai Cosmetix
All Vit E Pink Code:8858842023549 Vit C Hot Code:8858842023556 # Green Jeju Poppy #23 Natural Bright
All Sai Cosmetix Karmart